Reuzel - 3-in-1 Tea Tree Shampoo, Conditioner, Body Wash | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Reuzel - 3-in-1 Tea Tree Shampoo, Conditioner, Body Wash
အမျိုးအစား: စွယ်စုံသုံး Shampoo, Conditioner, Body Wash
--Cleanse | Nourish | Hair, Scalp, Skin--
ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူ မိတ်ဆွေတို့အတွက်...
တစ်မျိုးထဲနှင့် သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ခေါင်းအစခြေအဆုံးသန့်ရှင်းမှုကို တာဝန်ယူပေးပြီး၊ ပါရှိသော သဘာဝအဆီဓာတ်များဖြင့် ဆံသား၊ ဦးရေပြားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေတို့ကို အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးကာ ချောမွေ့ Condition ဖြစ်စေမဲ့ စွယ်စုံသုံး 3-in-1 Shampoo, Conditioner, Body Wash ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရိုးရှင်းမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများသာမက၊ အပြင်ထွက်အားကစား နှင့် Gym လုပ်သူများ၊ မကြာခဏ ခရီးထွက်ရသူများအတွက် ခေါင်းရှုပ်စရာမလိုပဲ သယ်ဆောင်သွားရန်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
သင့်တစ်နေ့တာအတွက် အားပြည့်၊ လန်းဆန်း ခွန်အားပေးမဲ့ သင်းပြံ့သော Peppermint ပူရှိန်းရနံ့ပါဝင်ပြီး၊ Tea Tree Oil ပါဝင်မှုကြောင့် ဗောက်ထခြင်းနှင့် အရေပြားပြဿနာများကို သက်သာကင်းဝေးစေပါသည်။
Reuzel ရဲ့ Signature Key Ingredients ဖြစ်တဲ့ T-4 Tonic Blend တွင်ပါဝင်သော သဘာဝ Witch Hazel Extract, Nettle Leaf Extract, Rosemary Extract, Horsetail Root Extract အစရှိသည်တို့က သင့်ဆံသား၊ ဦးရေပြားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး၊ လိုအပ်သော အစိုဓာတ်များကိုဖြည့်တင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Reuzel - 3-in-1 Shampoo, Conditioner, Body Wash ကို Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြပါတယ်။
ဆံသား၊ ဦးရေပြားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေတို့ကို ချောမွေ့ Condition ဖြစ်စေခြင်း
Tea Tree Oil ပါဝင်မှုကြောင့် ဗောက်ထခြင်းနှင့် အရေပြားပြဿနာများကိုလျော့နည်းစေခြင်း
On the go? Or maybe just trying to keep life simple? Keep Reuzel 3-in-1 Men's Tea Tree Shampoo, Conditioner & Body Wash on hand. It’saone-stop shop in keeping your hair, scalp and skin cleaned and nourished.
This is the simplest way to get clean from head to toe – each and every day. And it belongs in every man’s dopp kit and gym bag.
Tea Tree Oil and Reuzel's Signature T-4 Tonic Blend of natural witch hazel, nettle leaf,
rosemary and horsetail root extracts soothes skin, moisturizes and is ideal for overall scalp care.
Cleanses head-to-toe in one step
Nourishing and conditioning for hair, scalp & skin
Tea Tree prevents dandruff and skin irritations